Sanbaloole oo Qoraal uga jawaabay Wareysigii muranka dhaliyey [Akhriso Caddeyn iyo is-difaacid] | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
Sanbaloole oo Qoraal uga jawaabay Wareysigii muranka dhaliyey [Akhriso Caddeyn iyo is-difaacid]
Qabiil ma fiicna laakiin inta laga wada tagaayo kaaga ha ka tegin oo yaan la idin gaadin qaraabo
Waan hubaa in Dad badan oo maanta warkeyga wax ka sheegaya ay maalintaas aa-musnaayeen. Malaha ayaga ayaa faa’iido ku qabay. Sababta aan go’aankaas u qaatayna waxa ay aheyd in aan loo kala tegin oo loo helo dad wax isku cesha. Ayada oo taasi jirto hadana ma fiicana mana ahan in aan iska indha tirno xaqiiqda nagu xeeran oo ah in uu jiro umada kasta ra-yi hogaan u ah oo micneheedo yahay in Soomalidu qabyaaladeysantahay.
Anigu waxa aan la hadlaayey dadka ka soo jeeda constituencygeyga mana garan karaan mana dareemi karaan waxa iga guuxaya aniga oo aamusan. Waxaan kaliya oo aan tusaaleynayey in dhibku ku soo haray deegaanadooda oo ilaa xad deegaanada kale ee Soomaaliyeed hagaageen amaan ahaan iyo maamul ahaanba ayna tahay in ay boorka iska jafaan. Waa hubaa taas in Soomalida kale dani ugu jirto.
Waxaan jecelahay nolosheeda in aan arko Soomaaliya oo wanaagsan oo leh dad isku qanacsan iskuna tanaasula. Ma rabo in la ii arko qof raja beel abuuraya laakiin hadana waa in aan ogaanaa in umadaha guuleystay aysan aheyn kuwo is maaweeliya ee waxa ay aqbalaan in ay wajahaan isla markaasna ka hadlaan dhibta hortaala taas oo aan iska hadal iyo afka oo malab la marsado lagu bedeli karin.
Anigu waxaan aamisanaha in aan ahey qof ku qanacsan qofnimadiisa oo aqbali kara qaladkiisa ma qaldame waa ilaahay. Ma ahi qof waxayaabaha qaarkood ay saameyn ku yeeshan sida dacaayada iyo cadaadis la saaray. Laakiin waan aaminsanahay in ay muhiim tahay in la gar qaato.
Dabeeciyan ma ahi qof qucdad qaba sidaa daraadeed ha I cafiso dhamaan intii hadalkeyga dhibsatay ana waan cafiyey intii wax na kala gaareen. Qabiil ma fiicna laakiin inta laga wada tagaayo kaaga ha ka tegin oo yaan la idin gaadin qaraabo.
Waa walaalkiin Cabdullahi Maxamed Cali (Sanbalolshe).
Previous articleRa’iisal wasaare Kheyre oo kulan Gaara la yeeshay Macalin Maxamud & Sheekh Shaakir
Next articleAgaasimihii Madaxtooyada Hirshabeelle oo isu dhiibay Alshabaab & Warbaahintooda oo soo bandhigtay